ISuite eNtsha, intle kwaye iToyile kwiVernon Foothills
Indlu engasemva yonke sinombuki zindwendwe onguJanice
Indawo yeendwendwe yabucala eVernon Foothills eneqhosha lokungena lephedi, indawo yokungena eyahlukileyo kunye nenkqubo yokungenisa umoya. Le suite yondwendwe engaqhelekanga kwaye ekhululekile kwindawo yethu ezolileyo ilungele ukuba likhaya lakho kude nekhaya. Ikhitshi eligcweleyo, iwasha / isomisi, ibhedi yenkosi kunye nebhedi yekhabhathi yokumkanikazi. I-Wifi, i-cable tv kunye neelinen ezikumgangatho ophezulu/ibhedi zokuthuthuzela.
Indawo entle, ngaphakathi kwemizuzu eli-15 ukuya eSilverstar, eDowntown, kwiiWineries, kwiOrchards, amaChibi, ukuThenga kunye neendlela zokuhamba ngebhayisekile. Inkqubo ye-Gray Canal trail iyafikeleleka ngeenyawo.
I-suite ithambile kodwa i-minimalistic ukuqinisekisa ukukhululeka kokucoca iiprothokholi. Ikhaya lagqitywa ngo-2020, ke ngoko lifana nentsha. Ukulungiswa komhlaba kugqityiwe ngasemva kwaye kukho umbono omkhulu kwiintaba ukusuka ngefestile.
Ubumelwane bethu buzolile, bunobubele kusapho, kwaye kude nesiphithiphithi sesixeko. Sibekwe kufutshane nesiphelo sesitalato esingenasiphelo ukuze itrafiki ibencinci. Ibekwe kude nohola wendlela kunye neendlela zikaloliwe.
Sihlala kwindawo kwaye siya kufumaneka ngokobuqu okanye ngefowuni (isicatshulwa) ngexesha lokuhlala kwakho.